ရာဖိ အာမက် အာလ်ဝမ် အာလ်-ဂျနာဘီ ကို ကာကွယ်ရေး ထောက်လှမ်းရေး အေဂျင်စီ၏ လျှိူ့ဝှက်နာမည် "Curveball" ဟု လူသိများပြီး ၎င်းမှာ ဂျာမဏီနိုင်ငံသားတဦးဖြစ်ပြီး ၁၉၉၉ ခုနှစ်၌ အီရတ်နိုင်ငံမှ ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာကာ အီရတ်နိုင်ငံ ၏ အစုလိုက်အပြုံလိုက်သေစေနိုင်သောလက်နက်များပရိုဂရမ်တခု၏ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သော ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သည့် ဇီဝလက်နက်စမ်းသမ်းခန်းများ ထုတ်လုပ်ရာ စက်ရုံတခု၌ ဓါတုအင်ဂျင်နီယာ တဦးအဖြစ် လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြောင်း အခိုင်အမာပြောခဲ့သူဖြစ်သည်။ ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် ထုတ်ဝေသော အီရတ်စစ်တမ်းအဖွဲ့၏ နိဂုံးချုပ်အစီရင်ခံစာက အာလ်ဝမ်၏ စွပ်စွဲချက်များမှာ မှားယွင်းကြောင်း ပြသခဲ့သည်။ ယင်းထွက်ဆိုချက်များ၏ စစ်မှန်မှုကို မေးခွန် ...
D.O ဟု လူသိများသော တောင်ကိုရီယား အဆိုတော်၊ သရုပ်ဆောင် ဒိုဂယောင်းဆူ ၁၉၉၃ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁၂ရက် တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။ သူသည် တောင်ကိုရီယား-တရုတ် ယောက်ျားလေးအဆိုတော်အဖွဲ့ EXO မှ အဓိကအဆိုတော်တစ်ဦးဖြစ်သည်။
Enrique Miguel Iglesias Preysler သည် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအားဖြင့် Enrique Iglesias ဟု သိကြပြီး အဆိုတော်၊ သီချင်းရေးဆရာ၊ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆာင်နှင့် ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ သူသည် King of Latin Pop ဟု လေးစားခြင်းခံရသည်။ Iglesias သည် အသက်မွေးကျောင်းကို ၁၉၉၀အလယ်တွင် အမေရိကန် စပိန်ဘာသာ မှတ်တမ်းတံဆိပ် enrique Martimez အမည်အောက်မှ ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။ လက်တင်အမေရိကတွင်နှင့် အမေရိကန်မှ Hispanic ဈေးကွက် အကြီးမားဆုံးကြယ်ပွင့်များထဲမှ တစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ထောင်စုနှစ်အပြောင်းအလဲတွင် သူသည် mainstream ဈေးကွက်ထဲတွင် အောင်မြင်ခဲ့သည်။ Universal Music Latino နှင့် ၆၈သန်းအတွက် Universal Music Group အတွက် muti-album အရောင်းအဝ ...
Lonnie David Franklin Jr. ကို Grim Sleeper အမည်ဖြင့် ပိုမိုလူသိများသည်။ သူသည် စီရင်ချက်ချထားပြီးသော အမေရိကန် ကွင်းဆက်လူသတ်သမားတစ်ဦးဖြစ်ကာ ပြစ်ဒဏ်ကျခံရန် စောင့်ဆိုင်းလျက်ရှိသူ ဖြစ်သည်။ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်၊ လော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ်မြို့တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော လူသတ်ရန် ကြိုးပမ်းမှုတစ်ခုနှင့် အနည်းဆုံး လူသတ်မှု ၁၀ မှုတို့ကို ပြုလုပ်ခဲ့သူ ဖြစ်သည်။ ၁၉၈၈ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၂ ခုနှစ်အထိ ၁၄ နှစ်ကြာ ရာဇဝတ်မှုများမှ အနားယူခဲ့သည်ဟု ယူဆရခြင်းကြောင့် သူ၏ အမည်ပြောင်ကို ရရှိခဲ့သည်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင် ဖရန့်ကလင်းကို သံသယရှိသူအဖြစ် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရကာ နှောင့်နှေးမှုများစွာပြီးနောက် သူ၏ အမှုကို ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် ...
နိုင်းယယ်လ် ဂျိမ်းစ် ဟောရန် သည် ၁၉၉၃ စက်တင်ဘာ ၁၃ တွင်မွေးဖွားခဲ့သော အိုင်းရစ်အဆိုတော်နှင့် တေးရေးဆရာဖြစ်သည်။ One Direction အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ထင်ရှားကျော်ကြားခဲ့သည်။ ၂၀၁၀ တွင် Horan သည်ဗြိတိန်အဆိုတော်ပြိုင်ပွဲ The X Factor အတွက်တစ်ကိုယ်တော်ပြိုင်ပွဲဝင်ခဲ့သည်။ တစ်ကိုယ်တော်ဖျော်ဖြေသူအဖြစ် ရပ်တည်ပြီးနောက် နိုင်းယယ်လ်၊ လီယမ် ပိန်း ၊ လူးဝစ်တွမ်လင်ဆင် ၊ ဇမ်း မလိခ် နှင့် ဟယ်ရီ စတိုင် တို့သည်တီးဝိုင်းတစ်ခုထဲတွင်အတူတူပေါင်းစည်းခဲ့ကြသည်။ သူတို့က ပထမဆုရှင် Matt Cardle ကို ရှုံးနိမ့်ပြီး တတိယဖြင့်သာ ကျေနပ်ခဲ့ရသည်။ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အနေဖြင့်၎င်းတို့သည် အယ်လ်ဘမ်ငါးခု ဖြန့်ချိခဲ့ပြီး ကမ္ဘာလှည့်ခရီးစဉ် လေးခုကိုစတင်ခဲ ...
R ဇာနည် သည် မြန်မာအမျိုးသား အဆိုတော်တစ်ဦး ဖြစ်သည်။ ၁၉၇၈-ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်၌ မွေးဖွားသည်။ အမည်ရင်းမှာ ဇာနည်မျိုးညွန့် ဖြစ်သည်။ ပညာအရည်အချင်းမှာ ဆယ်တန်းဖြစ်သည်။ လေဆိပ်တွင် အလုပ်လုပ်ဖူးသည်။ နောက် သင်္ဘောလိုက်ရန် လုပ်ရင်းနှင့် အဆိုတော်ဖြစ်သွားသည်။လက်ဦးဆရာမှာ ဂီတမှူး ကိုသန်းဌေးတာမွေ ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဟစ်ဟော့ဂီတကို စပြီးမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သောအဖွဲ့မှာ ACID အဖွဲ့ဖြစ်ပြီး စတင်ခြင်း အယ်လဘမ် ဖြစ်သည်။ Rဇာနည်၊ အနဂ္ဂ၊ ဟိန်းဇော်ကွယ်လွန်၊ ရန်⁠ရန်ချမ်း၊ ဇေယျာသော်တို့ ပါဝင်သည့် အက်စစ်တေးဂီတအဖွဲ့ သည် မြန်မာနိုင်ငံ၌ အနုပညာ၊ စီးပွားရေးအရပါ ပထမဆုံး အောင်မြင်ကျော်ကြားခဲ့သည့် ဟစ်ဟော့ပ်ဂီတအဖွ ...
Cory Anthony Booker, နယူးဂျာစီပြည်နယ် များအတွက်အထက်လွှတ်တော်အမတ်တစ်ဦး အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု နိုင်ငံရေးသမားဖြစ်ပါတယ်။ သူကဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ ၏အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ဝီကီကိုးကားချက်ရှိ Cory Booker နှင့်ပတ်သက်သော ကိုးကားချက်များ
ဆနာယ ဣရနီ - သည် အိန္ဒိယ ရုပ်သံ ဇာတ်လမ်းတွဲ သရုပ်ဆောင် မင်းသမီး တစ်ယောက် ဖြစ်သည်။ သူသည် ဒီ အချစ် ကို ဘာ နာမည် ပေးသင့်လဲ? - Iss pyaar ko kya naam doon? တွင် ခူသျှီ ကုမာရိ ဂုပ္တ အဖြစ် သရု​​ပ်ဆောင်၍ လူသိများခဲ့သည်။ ဖြူစင် နှလုံးသား၊ နမော် နမဲ့ ချစ်ခြင်းပြိုင် နှလုံးသား စသည့် ဇာတ်လမ်းတွဲများ ဖြင့်လည်း နာမည်ကျော်ခဲ့သည်။
မိုင်းလ်ဒ် ဟုလူသိများသော Lapassalan Jiravechsoontornkul သည် ထိုင်းနိုင်ငံသား သရုပ်ဆောင် ၊ မော်ဒယ် တစ်ဦးဖြစ်သည်။ သူမသည် Ugly Duckling: Dont Series တွင် Maewnam အဖြစ်အထူးကျော်ကြားသည်။ မိုင်းလ်ဒ် သည် ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ကျော်ကြားသော သရုပ်ဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သည်။.
လေးရယ် အာဘူး သည် လက်ဘနွန်နိုင်ငံသူ အဆိုတော်၊ ဖျော်ဖြေရေးသမား၊ စင်မြင့်အကသမား၊ မော်ဒယ်၊ မွတ်ဆလင် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု ဆောင်ရွက်သူနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် တစ်ဦး ဖြစ်သည်။
ကင်သည် သူ၏ပွဲဦးထွက် ဇာတ်လမ်းကို ၂၀၁၅ ဘူဆန်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်တွင် ပြသခဲ့သည့် အိုဗာမန်း ရုပ်ရှင်တွင် စတင်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၇ တွင် "ကျောင်း ၂၀၁၇" ဇာတ်လမ်းတွဲ၌ ခေါင်းဆောင်မင်းသားအဖြစ် ရိုက်ကူးအပြီး နာမည်ကျော်ကြားလာသည်။
ဦးကမ်ဇာမုံ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၏ လက်ရှိဝန်ကြီးဖြစ်သည်။ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ကလေးမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် ၂ မှ ရွေးကောက်ခံရသူဖြစ်သည်။
ကားတစ် တီ မက်မောလန်
ကားတစ် ထရေစီ မက်မောလန် မေ ၂၁၊ ၁၉၅၈ ဖွား) သည် ဟားဗတ် တက္ကသိုလ်မှ သင်္ချာပညာရှင် ပါမောက္ခတစ်ဦးဖြစ်ပြီး၊ ကွန်ပလက်စ်ကိန်းခေါ် ကိန်းရှုပ်များ အသုံးပြုသည့် ပြောင်းလဲလှုပ်ရှားစနစ်များ ၊ ဟိုက်ပါဘောလစ် ဂျီဩမေတြီ နှင့် တိုက်ရှ်မူလာ သီအိုရီ ၊ စသည်တို့နှင့် သက်ဆိုင်သော သုတေသနလုပ်ငန်းများ အတွက် ကျော်ကြားသူဖြစ်သည်။
ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးကိုကို သည် စစ်တက္ကသိုလ် အပတ်စဉ် ၁၉ ဗိုလ်လောင်းသင်တန်းမှ သင်တန်းဆင်းအရာရှိတစ်ဦးဖြစ်သည်။ အမှတ်ခြေမြန်တပ်မ ဌာနချုပ် တပ်မမှူး၊ တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူးနှင့် အမှတ်စစ်ဆင်ရေးအထူးအဖွဲ့မှူး တာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ် မတ်လ ၃၁ ရက်နေ့မှစတင်ကာ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအဖြစ် ၂၀၁၆ မတ်လ ၃၀ ရက်နေ့အထိတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
ဦးကိုကိုလှိုင် သည် တပ်မတော်မှ သုတေသနပညာရှင်နှင့် စာရေးဆရာဖြစ်သည်။ဦးသိန်းစိန်အစိုးရ၏ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး၊ နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်သည်။ ၁၉၇၆ခုနှစ်တွင် စစ်တက္ကသိုလ်မှ ကျောင်းဆင်းခဲ့ပြီး တပ်မတော်သို့ ပြန်တမ်းဝင်အရာရှိအဖြစ် ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။၁၉၉၁ခုနှစ်မှ ၂၀၀၄ခုနစ်အထိ စစ်ရုံး၏ ပထမအဆင့် သုတေသနပညာရှင်အဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။၂၀၀၄ခုနှစ်တွင် ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ စာပေစိစစ်နှင့်မှတ်ပုံတင်ဌာနတွင် ရာထူးတိုးမြှင့်ခံခဲ့ရသည်။သူသည် မြန်မာစာပေနှင့် စာနယ်ဇင်းအဖွဲ့ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်ခဲ့သည်။
ကိုကိုဟိန်း သည် မြန်မာနိုင်ငံမှ ဘောလုံးသမားတစ်ဦးဖြစ်ပြီး မြန်မာအမျိုးသားဘောလုံးအသင်းနှင့် မြန်မာ ယူ-၂၃ ဘောလုံးအသင်းတို့တွင် နောက်တန်းခံစစ်နေရာတွင် ကစားလျက်ရှိသည်။ ထို့ပြင် မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ်တွင် ရတနာပုံ ဘောလုံးအသင်း၌ ကစားလျက်ရှိသည်။ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၆ တွင် ရတနာပုံအသင်းသို့ စတင်ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။